Zambia: “Hankalaza” ny Fanidína ilay Vohikala Fampitam-baovao ny Filoha Lefitra · Global Voices teny Malagasy
Zambia: “Hankalaza” ny Fanidína ilay Vohikala Fampitam-baovao ny Filoha Lefitra
Voadika ny 14 Janoary 2019 7:38 GMT
(Fanamarihana: lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny Jolay 2013)
Vao haingana izay, nilaza tamin'ny parlemanta ny Filoha Lefitra Zambiana, Dr. Guy Scott, fa hifaly raha toa ka hikatona ilay vohikala fampitam-baovao an'olontsotra tsy miankina, Zambian Watchdog.
Ny hariva mialoha ny fiatrehan'i Scott ny parlemanta ny 25 Jona, lasa nanano-sarotra tampoka ny fidirana ny Zambian Watchdog. Nilaza ireo mpamaky avy any ivelany fa afaka nitsidika soa aman-tsara ilay vohikala raha toa kosa nitatitra ireo avy ao Zambia fa tsy afaka.
Ao amin'ny Facebook, nitatitra ny mpampiasa iray:
nisy nanozona ny fosafosa isan'andronay…tsy mamaly ny watchdog
Ny Martsa 2012, voalaza fa voajirika ny Zambian Watchdog, anivon'ireo vohikala fampitam-baovao hafa, fanafihana heverin'ny maro fa notarihin'ny governemanta. Tanatin'ilay tranga tamin'ny herinandro lasa teo, nanomboka natahotra ireo mpamaky ny Zambian Watchdog fa tafiditra tanatin'io fanakanana io ny governemanta, rehefa namoaka tao amin'ny rindriny Facebook i Mwamba Peni II, mpandalina ny politikan'ny governemanta sady havan'ny Filoha Michael Sata, fa azony avy amin'ireo “tsaho” fa vita matavy ny Watchdog (tsy hitan'ny besinimaro intsony ilay lahatsoratra.) Andro iray taty aoriana, nitatitra ilay olana ny Zambian Watchdog:
Tsy mbola mazava tsara raha toa ka miketrika miaraka amin'ny governemanta ireo Mpamatsy Tolotra Aterineto hanakanana ny fidirana na raha toa ka ny governemanta no miditra antsokosoko ny fotodrafitrasa mivaingan'ireo mpamatsy tolotra Aterineto ireo.
Raha toa ka azo idirana io www.zambianwatchdog.com (rohy maty) io ivelan'i Zambia sy anaty faritra sasany ao Zambia amin'ny alàlan'ireo mpamatsy tolotra Aterineto toy ny MTN, nafindranay aminà sehatra https voaaro kokoa ilay vohikala. Raha ao Zambia ianao, efa afaka mitsidika ny Zambian Watchdog ao amin'ny https://www.zambianwatchdog.com (rohy maty)
Nasehon'ny rakitra avy amin'ny tolotra mampiantrano ny ZW fa mety ho mampiasa deep packet inspection (DPI), fomba fanivanana antontam-pahalalàna, ny governemanta Zambiana mba hanaraha-maso ny fifamoivoizana ao amin'ilay vohikala. Rehefa nanontaniana momba ny fandraisany anjara tanatin'ny hasarotry ny fidiran'ny olona amin'ilay vohikala ny governementa, nilaza izao tamin'ny parlemanta ny Filoha Lefitra:
Ity ilay vohikala nanameloka ny rehetra ho mpijangajanga, mpangalatra, marary efa ho faty, mpanao kolikoly, sns, noho izany [ho] faly izahay raha mikatona io satria mandratra ny endrikay any ivelany.
Nitatitra ny Kaomity Fiarovana ireo Mpanao Gazety (CPJ) tao amin'ny vohikalany:
Mino ireo ekipa ao amin'ny Watchdog fa ny governemanta no ao ambadik'ilay fanakanana noho ireo ezaka nataony taloha hampanginana io vohikala io. Tsy mazava raha toa ka nampirisika ireo mpamatsy tolotra Aterineto hanakanana ny fidirana ny governemanta na kosa nampiasa tetika hafa.
Nikatsaka ny hifehy ny haino amanjery fampitam-baovao anaty aterineto ny Filoha Michael Sata hatramin'ny nahavoafidy azy tamin'ny 2011. Rehefa nanao fianianana tamin'ny Lehiben'ny Fampanoavana, Mumba Malila, izy dia nilaza taminy mba hikaroka fomba hifehezana ireo vohikala fampitam-baovao tahaka ny Zambian Watchdog izay efa nifanandrina imbetsaka tamin'ny governemanta tany aloha.